Shiinaha Cavitation-ka cusub + RF + Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee Therapy Machine Velashape soo saaraha iyo alaab-qeybiye | LaserTell
Waxqabadka kooban ee Plushape:
1. Laydhka infrared-ka wuxuu yareeyaa dhibka maqaarka adoo kululeynaya maqaarka iyo tamarta RF waxay si qoto dheer u dhex gelaysaa unugyada isku xira. Isku-darka isku-dhafka ah ee laysarka infrared iyo tamarta RF ee la qabtay waxay kordhisaa faafitaanka oksijiinta intracellular iyadoo maqaarka la kululeynayo.
2. Vacuum oo lagu daro rollersyo si gaar ah loo qaabeeyey ayaa khalkhal gelinaya keenista RF inay ahaato xitaa 5-15mm. Isla mar ahaantaana, faakiyuumka iyo duubista mashiinka farsamaynta mashiinka mashiinka iyo fidinta unugyada isku xiran ee fibrillar, wuxuu si wax ku ool ah u jajabiyaa dufanka subagga iyo sidoo kale weelka xididdada ka soo baxa, Kordhi dheecaanka dheecaanka jirka, wuxuu dhiirrigeliyaa dheef-shiid kiimikaad wuxuuna yareeyaa ama hoos u dhigaa cabirka qolka dhabta ah ee dufanka oo aad u fiicnaaday saameynta jirka.
3. Teknolojiyada velashape ee faakiyuumku maqaarka isku laalaabaa waxay ka dhigeysaa in tamarta RF ay dhex gasho maqaar isku laaban, oo si weyn u wanaajiya saameynta iyo amniga, xitaa daaweynta aagga baalasha sare.
1.Velashape oo lagu daray bi-polar RF iyo tamarta IR; nuugista faakiyuumka oo isku dubaridan rollers farsamo
RF-ka iyo IR-ku waxay abuuraan kuleyl, iyagoo kordhiya waxa oksijiinta ku jira unugyada maqaarka.
Duugista mashiinka faakiyuumka ee khaaska ahi maqaarka ayay dejisaa oo waxay ka dhigtaa kulaylka ku-qaadashada kuleylka mid wanaagsan.
Waxay kordhisaa heerka dheef-shiid kiimikaadka waxayna yareysaa isku-duubnaanta dufanka iyada oo loo marayo dheecaanka qanjirada.
5.Waxay kordhisaa jilicsanaanta unugyada waxayna maqaarka ka dhigtaa mid jilicsan oo jilicsan.
6.40K wuxuu leeyahay tiknoolajiyad saameyn muuqata leh.
1. Wareeg madow oo ku wareegsan ka saarista indhaha, laalaabka indhaha hagaajinta iyo hagaajinta kiishka;
2.Upper qaadista baalasha sare iyo laalaabka duuduubka;
Soo kabashada umusha kadib, qaabeynta jirka dhalashada kadib;
Cayilka guud, isku-darka jirka, kala-baxa baruurta, maqaarka oo adkeeya (gacmaha, lugta, garbaha iyo dhabarka, kabaha buuraha, badhida, iwm);
5.Alleviate xanuunka arthritis-ka iyo daaweynta jirka oo dhan;
6.Socretch calaamadda hagaajinta.
Codsiyada Syneron Velashape:
1.Dhimista jirka, qaabeynta & qaabeynta
3. Adkaynta maqaarka
Maareynta Farsamada (Vacuum + Massage mechanism):
a. Wuxuu dajiyaa lymfatikada iyo wareegga dhiigga
b. Wuxuu fududeeyaa waxqabadka fibroblastka
c. Waxay yareysaa isku-dhafka unugyada unugyada dufanka badan
d. Wuxuu dhiirrigeliyaa is-beddelidda iyo soo-saaridda oksijiinta iyo nafaqooyinka
e. Waxay u sahlaysaa kuleylka qoto dheer
Kuleylka (tamarta infrared + tamarta soo noqnoqda):
a. Waxay kobcisaa wareegga dhiigga waxayna kordhisaa kala-go'idda oksijiinta ee oxyhemoglobin
c. Wuxuu kordhiyaa dheef-shiid kiimikaadka unugyada baruurta
d. Wuxuu hagaajiyaa maqaarka jirka
Shaashadda LCD 1) Shaashadda muujinta: 12, TFT Screen Touch Screen2) Shaashadda shaashadda handpieceq1: 2.4 ″
Ku muuji shaashadda shaashadda 2: 1.9 ″
Ku soo bandhig shaashadda shaashadda 3: 2.5 ″
Habka shaqada Garaaca wadnaha
Ballaca wadnaha 0.5s-7.5s
Cadaadis taban 1) Qiime dhammaystiran: 90kPa -25kPa (68.4cmHg - 19cmHg)2) Qiimaha qaraabada: 10kPa -75kPa (7.6cmHg - 57cmHg)
Rev ee rullaluistemadka 0-36 rpm
Habka shaqada ee duubista 2 nooc
Hubinta amniga Waqtiga dhabta ah ee khadka
RF inta jeer 1MHz
Cufnaanta tamarta RF Ugu badnaan: 60J / cm
Dhererka dhererka laser 940nm
Awooda leysarka MAX 20W
Tirada qalabka gacanta 4
Aagga daweynta 4mmx7mm 、 6mmx13mm 、 8mmx25mm 、 30mmx44mm 、 40mmx66mm 、 90mmx120mm
Awoodda gelinta la qiimeeyay 850VA
Habka korontada laga helo AC230V ± 10% ， 50Hz ± 1Hz
Cabbirka baakadka 54 * 58 * 146cm CM
Yuu noqon karaa musharrax ku habboon daaweyntan?
Daaweynta waxaa lagula talinayaa bukaannada caadiga ah iyo kuwa miisaankoodu culus yahay ee ka cabanaya cellulite aan fiicnayn oo ku yaal gobolka miskaha, hareeraha
miskaha, caloosha, ama addimada hoose. Natiijooyinka lafilayo, bukaanadan waa inay sidoo kale ka go'an tahay inay ilaaliyaan caafimaad qab
qaab nololeedka. Dhakhtarka daweynta ayaa leh go'aanka ugu dambeeya ee xulashada kuwa ugu fiican ee daaweynta.
Immisa daaweyn ayaa loo baahan yahay?
Jirka iyo addimada, 8-10 daaweyn cashar kasta, 4-5 maalmoodba hal daaweyn, 30 daqiiqo daaweyn kasta.
Wejiga, 10 daaweyn hal kulan, usbuucii hal mar, 15-20 daqiiqo daaweyn kasta.
Duuduubka isha, 10 daaweyn hal mar, usbuuciiba mar, 15 daqiiqo daaweyn kasta.
Muddo intee le'eg ayey natiijadu socon doontaa?
Waxaan kugula talineynaa 10 daaweyn ahaan kulan ahaan, waxaa jiri doona horumarino kala duwan daaweyn kasto kadib. Natiijooyinka waxay socon karaan ilaa dhowr
sano iyadoo kuxiran da'da, qaab nololeedka iyo isbeddelada hoormoonka, fadhiyada dayactirka waxaa lagula talinayaa in lagu kordhiyo saameynta natiijooyinka,
waxaan kugula talineynaa bishiiba hal mar kadib markaad hesho natiijooyinka aad rabto. 1-5cm waxaa laga dhimi doonaa bowdyaha, 2-6cm caloosha iyo dhexda.
Maxay yihiin waxyaabaha diidmada ah?
Ma jiraan waxyaabo ka hor imaan kara daaweynta. Bukaannada leh wadnaha wadnaha / defibrillator, uur ama kalkaaliso ama daran
dhibaatooyinka caafimaadka, waxaa lagugula talinayaa inaad dib ugu dhigtid dhakhtarkooda kahor intaanad bilaabin daaweynta.
Hore: Mashiinka khafiifinta iibinta kulul ee Vacuum Rollers RF cavitation velashape
Xiga: Vacuum rf rogid cellulite dufanka ka saarista duugista mashiinka khafiifinta vela
Nidaamka Jirka Ugu Fiican 4 Qabashada Baruurta Barafowga ugub ...
isticmaalka multifunctional quruxda laser nd yag tattoo ...
Xirfad 10600nm jajaban CO2 Laser denta ...
Hot Hot mishiinka rullaluistemadka vacuum RF cav ...
Wareeg saddex-laab ah 755 808 1064 diode laser timaha ...
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, 3 Gudaha 1 Ipl, Module Laser 808, Opt Shr Ipl Timaha Jooji, Diode Timo Goynta Laser Guriga, Ipl Xenon Flash Siraaj, Laser Epilator Ipl, Dhammaan Alaabooyinka Qolka 308, No.12, Jingsheng South 2nd Wadada, Degmada Tongzhou, Beijing, Shiinaha